Kusiphaphamisile ukungenelwa yigoli - Mngqithi - Impempe
Kusiphaphamisile ukungenelwa yigoli – Mngqithi
UThemba Zwane weMamelodi Sundowns egqashula nebhola bebhekene neTshakhuma
Umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi, uthi kubaphaphamisile ukungenelwa yigoli ngesikhathi bebhekene neTshakhuma FC emdlalweni weDStv Premiership, ePeter Mokaba Stadium, ngoLwesibili.
ISundowns igcine iwine lo mdlalo ngo 3-1 yize kuyiTshakhuma eshaye inethi kuqala. Amagoli amaBrazilians ashaywe uRivaldo Coetzee, Sphelele Mkhulise noSibusiso Vilakazi. EleTshakhuma lize noThembisani Nevhulumba.
Ukuwina kweSundowns kwenze yavula igebe laba ngamaphuzu ayisithupha esicongweni. Ngaphandle kwalokho ayiyazi induku emidlalweni yePremiership engu-19.
UMngqithi uthe akeneme ngendlela abadlale ngayo futhi negoli abalidedelile usafuna ukulibukisisa kahle ngoba kukhona angakuqondi ngalo.
“Besazi ukuthi sidlala nezimbangi ezinzima, futhi besazi ukuthi bayakufuna ukuwina ngakho bazoza kithina. Besifuna ukuqala kahle, asibanga nenhlanhla yokuthola igoli ngokushesha. Kukhona lapho ebesicabanga ukuthi bekumele sithole khona iphenathi kodwa kwangenzeka.
“Sibe nabhadi ukuthi sidedele igoli esilidedelile kodwa ngisafuna ukubuka ivideo ngoba ngicbanga ukuthi bekuyi-offside. Kodwa lifake ingcindezi kithina ngoba bese kumele sixebuke emuva kanti bayingozi uma behlasela ngokuzuma. Banabadlali abafana noRakhale, Mnyamane, futhi bekumele sisebenze kanzima,” kusho uMngqithi.
ISundowns ibuye seyishintshe kakhulu ngesiwombe sesibili nokuyilapho kucace khona ukuthi iTshakhuma ngeke ilunge.
“Sithe ukuphakamisa izinga ngendlela ebesidlala ngayo, saphaselana ibhola kahle nangokushesha, okuyinto esihlale siyifuna. Mhlawumbe leli goli abalishayile lisisizile ukuthi sibuyele emdlalweni wethu esiwujwayele kwiSundowns. Siqale ukukhuphula izinga lomdlalo okwenze izinto zaba nzima kakhulu kubona.
“Kodwa kumele sivume ukuthi asidlalanga ngendlela ebesifuna ngayo. Senze inqwaba yamaphutha, futhi ukuphatha kwethu ibhola ngezinye izikhathi bekungagculisi neze. Yinto esisebenza kuyona kodwa ngigculisekile ngendlela esisebenzise ngayo abadlali bethu basemuva njengoba bekusho umqeqeshi uRulani Mokwena.
“Yilapho igoli likaMkhulisi liqhamuke khona, uThapelo ubengenza okufanayo noLyle ubengalishaya igoli ngalowo mnyakazo. Abadlali babo basezimpondweni bebengasihluphi kakhulu yingakho besifuna ukusebenzisa abadlali bethu basemuva uma sihlasela,” kuphetha uMngqithi.
Emdlalweni olandelayo weligi iSundowns izobhekana neChippa United eSisa Dukashe Stadium ngoMsombuluko.
Previous Previous post: Ucasha ngesithupha uHunt kolukaNange ongajabulanga ekora kwiChiefs
Next Next post: Kuqaqambe inhliziyo kuBarker ezakhe ziyibamba ziyiyeka inyamazane